ထူးဆန်းသော လူမျက်နှာနှင့် ဆိတ်တစ်ကောင် မွေးဖွားမှုကို မလေးရှားတာဝန်ရှိသူများ စုံစမ်းနေ | Buzzy
ဒီဆိတ်မွေးဖွားလာတာဟာ ဆိတ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားက ဆိတ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့လို့များ ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာပါ
ဂျိုဟာပြည်နယ်က စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီဆိတ်ပေါက်လေးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ အချိန် တစ်လလောက်လိုမယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ် ။
ဒီဆိတ်လေးဟာ မလေးရှားတောင်ပိုင်း နေထိုင်တဲ့ Ibrahim Basir ရဲ. ဆိတ်ကလေးဖြစ်ပြီး ၊ ထူးထူးခြားခြား လူမျက်နှာနဲ့ တူနေလို့ သူဟာ အင်တာနက်ပေါ် ဓါတ်ပုံတွေ တင်ခဲ့ပါတယ် ၊ ဆိတ်ကလေးကို ဝယ်ယူဖို့ ပိုက်ဆံနဲ့ကမ်းလှမ်းသူတွေ ရှိပေမယ့် မရောင်းချခဲ့ပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့်လည်း ဆိတ်လေးက ကြာရှည်မခံပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Ibrahim ရဲ. အဆိုအရ ဆိတ်ကလေးဟာ မျက်နှာ ၊ နှာခေါင်း ခြေထောက်တွေဟာ လူအတိုင်းပါပဲတဲ့ ။
အခုအချိန်မှာတော့ ဒီဆိတ်လေးဟာ ဘာကြောင့် လူနဲ့တူရသလဲ ဆိုတာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါပြီ ၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေက လူရဲ. DNA နဲ့ အခြားသတ္တဝါတွေရဲ. DNA မတူညီတာမို့ မျိုးစပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုထားပေမယ့် အစိုးရနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဆိတ်ကလေးဟာ လူပုံဖြစ်နေခြင်းဟာ ဆိတ်မကြီးနဲ့ ဆိတ်ပိုင်ရှင်များ လိင်ဆက်ဆံခဲ့လို့လားဆိုပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ရပ်အနေနဲ့ စဉ်းစားနေပါတယ်။
မိန်းကလေးမရ,မချင်း ကလေးဆက်ယူနေဦးမယ်လို့ဆိုတဲ့ သား(၁၃)ယောက်ရဲ့မိဘနှစ်ဦး
ဘာမြူဒါ တြိဂံ ဒေသမှာ ပျောက်ကွယ် ခဲ့ရတဲ့ လေယာဉ်တွေ